ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းက ရင်ဆိုင်လာရမည့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ
စတော့အိပ်ချိန်း စာရင်းဝင်ဖြစ်ရေးအတွက် ကုမ္ပဏီများက ပြင်ဆင်ချိန်တွင် ကုမ္ပဏီများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် နိုင်ငံတော်သို့ အခွန်ပေးဆောင်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းကဲ့သို့သော အမွေခံပြသနာများကြောင့် မြန်မာကုမ္ပဏီများ ခေါင်းခဲနေကြရသည် သောမတ်စ် ကင်းန် ရေးသားသည်။ ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းကို စတင်တည်ထောင်လိုက်ချိန်တွင် မြန်မာကုမ္ပဏီများက စတော့အိပ်ချိန်း စာရင်းဝင်ဖြစ်ရန် အလုအယက် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ စတော့ဈေးကွက် စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီဖြစ်လျှင်.
တက်ကြွလှုှုပ်ရှားသူများကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ထပ်မံ လိုအပ်နေ
ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဥပဒေအမြောက်အများကို မကြာမီ ပြန်လည်ကျင်းပမည့် လွှတ်တော်များတွင် ဖျက်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက် အစိုးရသစ်အနေဖြင့် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်သည်ဟု နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ စိတ်ကြွဆေးပြား ဒေါ်လာနှစ်သန်းကျော်ဖိုးခန့် ဖမ်းမိ
ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နှင့် နယ်နိမိတ်ဆက်စပ်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်သည် တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ စိတ်ကြွဆေးဝါးများ တင်ပို့နေသည့် လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် တည်ရှိနေသည်
ပြည်ပဘဏ်များကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်ပေးလိုက်လျှင်လည်း စိုးရိမ်မှုမရှိဟု ပြည်တွင်းဘဏ်အချို့ဆို
မြန်မာပြည်တွင်းသို့ဝင်ရောက်ကာ အကန့်အသတ်များဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေရသော နိုင်ငံခြားမှ ဘဏ်ကြီးများအား ပြည်တွင်းဘဏ်များနည်းတူ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝပေးလိုက်လျှင်လည်း စိုးရိမ်မှု မရှိတော့ကြောင်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်အချို့က မီဒီယာများကို ဇွန် ၂၈ ရက်နေ့က ပြောကြားလိုက်သည်။ ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိုးလင်းထွန်းနှင့် ရိုးမဘဏ်၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ ဟဲလ်ဘိုရှာတို့က ရန်ကုန်မြို့၌ ပြုလုပ်သော ၂၀၁၆ ခုနှစ်.
ငွေကြေးခဝါချမှု စောင့်ကြည့်စာရင်းမှ မြန်မာအား ဖယ်ရှားပေး
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအစိုးရများက ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Financial Action Task Force က မြန်မာနိုင်ငံအား စောင့်ကြည့်သည့်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည်
မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းများအား ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ အခက်ကြုံနေ
မူးယစ်ဆေးဝါးများကို သယ်ဆောင်ရာလမ်းတွင် ရှာဖွေဖမ်းဆီးသည့်နည်းလမ်းနှင့် သတင်းပေးများမှတစ်ဆင့် စုံစမ်းဖော်ထုတ်သည့် နည်းလမ်းတို့သုံးကာ တားဆီးနှိမ်နင်းနေသော်လည်း လက်တွေ့တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်သူနှင့် တစ်ဆင့်ခံ ဖြန့်ဖြူးသူအထိသာ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်သေးသည်
လက်နက်စွန့်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးဟု အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်က ပြောကြား
လက်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရက ကျင်းပရန် စီစဉ်နေသည့် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံအား တက်ရောက်ရန် အေအေအဖွဲ့အား ဖိတ်ခေါ်ထားခြင်းလည်းမရှိသေးဟု ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်က ပြောကြားသည်